Ardayda dugsiyada sare ee Puntland oo isu diyaarinaya imtixaanka fasalka 4-aad (form 4) ee sannad dugsiyeedka 2009/2010. – Radio Daljir
Ardayda dugsiyada sare ee Puntland oo isu diyaarinaya imtixaanka fasalka 4-aad (form 4) ee sannad dugsiyeedka 2009/2010.
Waxaa ka socda iskuulaadka sare ee gobollada Puntland u diryaar garowga imtixaanka fasalka 4-aad (form 4) ee sannad dugsiyeedka 2009/2010.
Dugsiyada sare ee Hawd, Buuhoodle & dugsiga sare ee Burtine, Buurtinle ayaa ka mid ah iskuulaadka u diyaar garoobaya imtixaanka sannadkan. Dugsiga sare ee Hawd waxaa imtixaanka u fariisan doona 20 arday, halka 25 arday ay imtixaanka u fariisan doonaan dugsiga sare ee Buurtinle.